Maxkamada ciidamada oo amar adag ka soo saartay isku dhacyada ciidamada - Caasimada Online
Home Warar Maxkamada ciidamada oo amar adag ka soo saartay isku dhacyada ciidamada
Maxkamada ciidamada oo amar adag ka soo saartay isku dhacyada ciidamada
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute, oo la hadlayay ciidamo ka jawaabay dalabkii Madaxweynaha kedib weerarkii 14-kii October oo ku jira dugsiga tababarka Gen. Gordan ayaa kula dar-daarmay marka hore in ay ku shaqeeyaan anshax wanaag.
Guddoomiyaha ayaa uga digay ciidamada in dhexdooda ay isticmaalaan qabyaaladda, waxa uuna ku nuux-nuuxsaday in qofkii arrimahaasi ku soo cadaadaan loo ciqaabi doono, isagoo sii wata hadalkiisa ayuu ciidamada kula dar-daarmay in ay bartaan qeybaha kala duwan ee aqoonta, rajjooyinkooda iyo hamigoodana ay sara u qaadaan.
Mar uu soo hadal qaaday dhacdooyinka ciidamada dhexdooda ah oo maalmahan dambe ka dhacayay magaalada ayuu si cara leh u sheegay in aan la aqbali doonin in shacab ay ku dhinteen isku dhacyada ciidamada.
Laamaha baarista oo kaashanaya xeer ilaalinta ciidamada ayuu ku amray in ay baaraan dambiyadii dhacay, soona cadeeyaan cidda masuuliyadda wixii dhacay dusha u ridata si loo mariyo wadada cadaaladda.
Gaba-gabadii ayuu sheeegay Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad in aysan noqon doonin markii ugu dambeysay oo ay u yimaadaan ciidamada balse ay si joogta ah uga howlgeli doonaan rugaha ciidamada.
Maalmihii la soo dhaafay Magalada Muqdisho waxaa ku soo kordhayey isku-dhacyada Ciidamada dowladda Dhexdooda ah kaas oo sababay dhimashada dad Shacab ah.